NewatchOS 3 Mickey naMinnie tiudzei nguva nemuromo | Ndinobva mac
NaWatchOS 3 Mickey naMinnie tiudzei nguva yacho nemuromo
Vazhinji venyu munogona kunge muchitoziva kuti iyo nyowani vhezheni yeApple Watch inoshanda sisitimu, watchOS 3, yawedzera shanduko dzakawanda uye imwe yeiyi sarudzo inotibvumidza teerera kune izwi raMickey naMinnie (zvinoenderana newachi watinoshandisa) vachitaura nguva iripo. Ichi ndicho chinhu chatakambokurukura pawebhu mwedzi mitatu yapfuura uye zvinoita sezvakakodzera kuchirangarira kuitira kuti vese avo vane Apple Watch ine yazvino vhezheni iripo vagone kuishandisa.
Basa racho riri nyore kuita uye kuti vatitaurire iyo nguva zvinonzwika, zvese zvatinofanirwa kuita kumanikidza pawatchface kana kufona patinenge tasarudza pawatch, dzimwe nguva ivo vanotoburitsa kuseka kudiki kwakanaka mushure mekutiudza nguva yacho. Icho hachisi chinhu chinotisiya isu nemiromo yedu yakashama kure nazvo, asi idiki diki iyo isu tine chokwadi chekuti vazhinji venyu muchada uye kunyanya kana muine vana vadiki kumba.
Dambudziko roga nderekuti vana vadiki pamba havamire kukumbira iwe kuti varege vachimanikidza wachi kuitira kuti Mickey kana Minnie vanokuudza nguva yacho. Kazhinji, zvakanaka kunyangwe chiri chinhu chidiki chisinga wedzere kuwedzera kune wachi, kure nazvo, asi zvakanaka kune dzimwe nguva uye kunyangwe shamwari nevanozivana navo kuti vaise kumeso kwavo pavanonzwa ivo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » NaWatchOS 3 Mickey naMinnie tiudzei nguva yacho nemuromo
Warhammer 40.000: Kwayedza yeHondo II inowanikwa yeMac China chinotevera